Weeraryahanka Liverpool Ee Roberto Firmino Oo Messi,Ronaldo & Neymar Kula Biiray Xiddigaha Sida Weyn Looga Cabsado Ee Mishiinka Goolasha Champions League – Kooxda.com
Home 2018 February Ingiriiska, Wararka Maanta Weeraryahanka Liverpool Ee Roberto Firmino Oo Messi,Ronaldo & Neymar Kula Biiray Xiddigaha Sida Weyn Looga Cabsado Ee Mishiinka Goolasha Champions League
Weeraryahanka Liverpool Ee Roberto Firmino Oo Messi,Ronaldo & Neymar Kula Biiray Xiddigaha Sida Weyn Looga Cabsado Ee Mishiinka Goolasha Champions League
Marka laga hadlo gool dhaliyayaasha champions league waxa isla markaasba qalbigaaga ku soo dhacaya xiddigaha Cristiano Ronaldo, Lionel Messi iyo Neymar kuwaas oo haatan la odhan karo waa xiddigaha ugu fiican adduunka.
Hadaba waxa ka dambeeya xiddiga weerarka uga ciyaara Liverpool kaas oo aan helin aqoonsiga in uu yahay gool dhaliye isla markaasna aan lagu soo darin weeraryahanada yurub ee gool dhaliyayaasha ah inkasta oo uu qaar badan ka fiican yahay.
Kadib wareegii Group-yada Roberto Firmino ayaa kaliya ka dambeeyay xiddiga Real Madrid ee Ronaldo tartanka loogu jiro kabta dahabka ah ee champions league halka isaga iyo xiddiga ay isku kooxda yihiin ee Mo Salah yihiin labaanaha 2-aad ee ugu goolasha badan yurub iyaga oo ka dambeeya xiddigaha kooxda PSG ee Neymar & Edinson Cavani.
Ciyaaryahanka reer Brazil ayaa ah mid aan ku faani karin, lakiin waxa uu qirtay inuu la mid noqdo saddexda xiddig ee ugu fiican kubada cagta isaga oo waliba ku haminaya in uu dhaliyo goolal badan xirfadiisa ciyaareed.
“Dabcan waxa aan doonayaa in gaaro heerkooda, waxa aan isku dayayaa in aan kooxdayda siiyo dadaalkayga ugu badan waxana aan doonayaa in aan la mid noqdo xiddigaha ugu waaweyn yuru”ayuu yiri.
“Kaakiin waxa kaliya ee aan diirada saaro ayaa ah in aan kubad fiican ciyaaro, hadii aan kubad fiican ciyaaro kadib goolashu way iska imanayaan”.
Firmino ayaa ka ciyaara door isku dhex jir ah kooxdiisa Liverool isaga oo ka ciyaara No.10 iyo waliba weerarka toos ah isaga oo adeegsada awoodiisa badan isaga oo daafaca ilaa weerarka ka ciyaara.
Waxa uu sidoo kale isku badalay gool dhaliye isaga oo ah sababta weyn ee ay kooxdiisa Liverpool u tahay kooxda 2-aad ee ugu goolasha badan taariikhda champions league.